Incwadi Yonke I-Analytics Professional Kumele Ifundwe | Martech Zone
Eminyakeni embalwa edlule umngane wami omuhle uPat Coyle, ongumnikazi we- inkampani yezokumaketha ezemidlalo, wangikhuthaza ukuba ngifunde I-Moneyball. Ngesizathu esithile noma ngesinye, angizange ngiyibeke incwadi ohlwini lwami lokufunda. Emasontweni ambalwa edlule ngibuke i-movie futhi ngayi-oda ngaso leso sikhathi incwadi ukuze ngikwazi ukungena endabeni ngokujule nakakhulu.
Angiyena umfana wezemidlalo… kungenzeka nawe ungabi njalo. Ngijwayele ukujabula nganoma yimuphi umdlalo wasekolishi noma wezemidlalo okhokhelwayo ngaphandle kokuthi kube yiStanley Cup enhle. Uma ungazithandi ezemidlalo kodwa uthanda izinombolo, izibalo kanye nokuhlaziywa, kusamele ufunde le ncwadi. UPaul Depodesta (umlingiswa wakhe nguPeter Brand ku-movie edlalwa nguJona Hill) ubuchopho bomsebenzi… esebenza ngezibalo ukukhomba abadlali ababhekiswe kubo ngokususelwa kumaphesenti abo asisekelo. Akunandaba ukuthi bekungukuhamba okukodwa, okuphindwe kabili noma ngisho nokuhamba. UBilly Beane uyisicubu… iMenenja Jikelele ebheja iqembu lakhe nomsebenzi wakhe ekusebenziseni izibalo (kanye nomkhuba wokuhweba onolaka oletha imali ethe xaxa yethalente) ukuyisa ama-Oakland A ezingeni lomlando lokuwina.
Ngeke ngikumoshele le ndaba, kepha nansi ukubuka konke. Ama-Oakland A anesabelo-mali sesithathu samaqembu amaningi ukuthenga ithalente. Ukuze bancintisane, babedinga okunye - analytics. Imboni ye-baseball ifana nanoma iyiphi enye imboni, njengoba ikhule ngeminyaka, usayizi kanye nengcebo, ulwazi lwezikhungo iyajula. Inkinga ukuthi ulwazi lwesikhungo alulungile… alulungile neze. Amageyimu anqotshwa ngokwezibalo futhi alahlekile ngokushaya nokugijima, hhayi ngamaphutha, ukugijinywa kwasekhaya noma ukunqotshwa ngabadlali be-beefy, abasikwele bomhlathi. Cabanga ngebhizinisi lakho kanye nokucabanga kwakho okwenzayo ngoba bekuyiyo njalo kwenziwe kanjalo.
Inkinga ku- Imboni yezibalo iphindwe kabili. Ngenkathi amaqhinga wethu wokumaketha eguquke ngale kwesayithi lethu nokuxhumana komsebenzisi kushintshe kakhulu (iselula, ividiyo, ithebhulethi, ezomphakathi, njll.), Uma ungena ngemvume kuwebhu yakho analytics ubona kahle kakhulu lokho esikubonile emashumini ambalwa edlule. Enye inkinga ukuthi ulwazi lwezikhungo selufake ubuthi kuzo kanye izisekelo zomkhakha. Onke amathuluzi wakamuva wokuhlaziya nawokulinganisa awusizo ayenziwa ngaphandle imboni.
Impumelelo yochwepheshe bezokumaketha ivame ukukalwa kumazinga e-bounce, ukubukwa kwamakhasi, abalandeli nabalandeli… lapho kungenzeka angabi nomthelela wezibalo emiphumeleni yangempela yebhizinisi. Kuyiqiniso ukuthi amaphutha nama-homeruns angashintsha umdlalo webhola le-baseball, njengoba nje ukuthutheleka okuphezulu kokubukwa kwamakhasi kungathonya ibhizinisi… kepha umbuzo uwukuthi ngabe kuyinkomba yokusebenza yini ongayithonya ngqo.
Okugcina kubaluleke kuwo wonke amabhizinisi yikho kokubili ukuhola nokuguqulwa. Cabanga ngokuthi usetha kanjani i analytics i-akhawunti. Umbuzo wokuqala uthi yisiphi isizinda yakho analytics izofakwa ku ?! Yilokho okungalungile umbuzo uwonke, umbuzo kufanele ube uwathola kanjani amakhasimende? Ngemuva kwalokho umbuzo wezindaba kufanele ube ukuthi uwuthathaphi. Futhi mangaki ufisa ukukhula ngawo. Ngaleso sikhathi, i- analytics ipulatifomu kufanele isize ukuthwebula yonke imithetho futhi ikusize uqonde ukuthi iziphi ezibalulekile nokuthi yiziphi ezingasebenzi.
Njalo analytics uchwepheshe kufanele afunde I-Moneyball futhi kwakha kabusha ukuqonda kwabo ukuthi amabhizinisi aqhuba kanjani imiphumela ku-inthanethi - noma ngabe kuyisayithi le-ecommerce elinokuthengisa okuqondile, ukushicilelwa kwewebhu okuzuza imali ngemali engenayo yokukhangisa ngokususelwa ekuvakasheni, inkampani yesevisi edinga ukushayela ama-aphoyintimenti, inkampani yezobuchwepheshe edinga amademo amaningi wewebhu, noma inkampani izama nje ukuthinta umuzwa nokufinyelela komkhiqizo wayo.
kuwebhu analytics iponi eliyiqhinga elilodwa… ukuzama ukulingana nethuluzi lamathuluzi elidala kuzo zonke lezi zimo ezintsha. Sidinga i- new i-toolset eqala ngesimo bese isibonisa ukuthi singalinganisa kanjani impumelelo kunoma iyiphi indlela noma ipulatifomu.
Tags: Ama-Analyticsizibalo zebhizinisiukuguqulwa kokuhlelwaukuguqulwaimigomokushaya ama-runsmarketing kwangaphakathiukuhola isizukulwaneimikhondoimaliincwadi yemaliimali ye-movieizibalo
Jan 23, 2012 ku-11: 02 AM
Indaba yayo enhle. Wenze incwadi enhle ne-movie enhle. Futhi akulona iqiniso. UBeane uzuze njengefa iqembu eliyinhloko labadlali bezinkanyezi elihlanganisa uchungechunge lwakhe lwezinkathi zempumelelo. Amaqembu akhe awazange aphumelele ngokubonakalayo kusukela lapho.
Lokho okukhonjiswa yiMoneyball empeleni ukuthi ukwakha uphawu kwabezindaba kuhlobene kuphela nokusebenza okusebenzayo. Okubalulekile ukudala inoveli nokulandisa okuthakazelisayo. Abezindaba bazowashaya indiva noma yimaphi amaqiniso aphikisayo ngaphandle kokuthi othile anentshisekelo enkulu yokuphazamisa lokho kulandisa.
Jan 23, 2012 ku-11: 18 AM
Le ncwadi empeleni ikhuluma ngokuhlehla emuva okuvela embonini esahlukweni sokugcina futhi inikezela ngeminye imicimbi eyengeziwe yokuxhasa ithisisi yayo. Kubonakala sengathi uMichael Lewis ugcwele izimpaphe ezithile embonini. Angingabazi ukuthi izibalo akuzona “ukuphela kwento” eshayela iqembu elikhulu. Amaqembu afana namaYankees abuswa ngabaqeqeshi abanohlonze, abadlali abakhulu abangawenza emtholampilo kanye nezinye izinto eziningi. Ngokuphathelene nokulahla yonke indaba njengengamanga, kuzodingeka ngivumelane nawe ngenhlonipho. Ama-Oakland A's asebenzise izibalo ukuhlaziya abadlali, namanye amaqembu avuma ukuthi alandela ukuhola kwawo ngemuva kwalokho.
Kunoma ikuphi, yindaba efanele ibhizinisi ngokujwayelekile. Abantu bavame ukwenza ukucabanga esikhundleni sokubheka ubufakazi phambi kwabo. Lokho kungukuziphatha kwendaba lapha.
Jan 25, 2012 ngo-5: 14 PM
Iposi lebhulogi mayelana nezinkanuko zami ezimbili, i-baseball kanye nemithombo yezokuxhumana? YEBO!
Umnyombo weMoneyball umayelana nokukhomba izimpahla ezingabekiwe ukwakha impumelelo ngempumelelo. Ngenkathi wonke umuntu ephumile ekhokhela isilinganiso sokushaya, ama-run ekhaya ne-ERA, uBeane wayegxile ku-OBP. Futhi iphuzu abantu abaningi abaliphuthelayo ukuthi iMoneyball akuyona eyokwakha ezungeze i-OBP. Imayelana nokwakha ezungeze isibalo esingabaliwe. Manje njengoba iligi isibambile futhi i-OBP isaziswa kakhulu, uBeane kufanele azivumelanise.
Kuyafana nokukhangisa kwedijithali. Wonke umuntu uthi chitha isikhathi sakho nemali ku-Facebook, ku-Twitter naku-Google +. Kepha mhlawumbe impahla engabizi kakhulu yiPinterest, okungenani eyomkhiqizo wakho, futhi kuzoba utshalomali olusebenza kangcono kuwe.
Ngakho-ke vumela wonke umuntu ngokungaboni aphonse imali ezungeze emakhaya agijimayo futhi ashaye isilinganiso. Uzogxila ku-OBP (Pinterest). Konke kumayelana nokungasebenzi kahle kwemakethe.